National Power News:: आमाबुबाको इच्छा, छोराछोरीलाई बोझ National Power News:: आमाबुबाको इच्छा, छोराछोरीलाई बोझ
आमाबुबाको इच्छा, छोराछोरीलाई बोझ
Thursday, July 12, 2018 National Power
आफ्नो बच्चालाई हरेक क्षेत्रमा अब्बल बन्न दबाब दिने आमाबुबाहरुले यस्तो सोचले कलिला बच्चाहरुलाई कति भार पर्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । हाम्रै समाजमा धेरै आमाबुबाले आफ्ना बच्चाहरुलाई पढाईको अतिक्ति अन्य क्षेत्रमा पनि अब्बल हुन दबाब दिने गर्छन् । त्यस्तै आजभोली टिभीमा बच्चाहरुसँग सम्बन्धित धेरै खालका रियालिटी शो आँउछन् । यसलाई लिएर पनि आमाबुबा आफ्नो बच्चाप्रति धेरै नै चिन्तित हुन्छन् । उनीहरुलाई रियालिटी शोमा भाग लिने बच्चाहरु धेरै चलाख र प्रतिभाशाली भएका र आफ्नो बच्चाले पनि केहि पनि नजानेको जस्तो लाग्छ र बच्चाहरुलाई त्यस्तै बन्न दबाब दिन्छन् । अब तपाई नै सोच्नुहोस्, सानो ज्यान र कलिलो मस्तिस्कमा यति धेरै बोझ थोपरिदिँदा उनीहरुको हालत कस्तो होला रु यस्तो भागदौडको बीचमा अबोध बच्चाहरुलाई न आफ्नो इच्छा आकांक्षाको पंखेटा फैलाउने फुर्सद हुन्छ न त थाकेर सुस्ताउने फुर्सद नै ।यस्तो दिनचर्या आजभोली धेरै बच्चाहरुको छ जसको आमाबुबाले उसलाई सबै कुरा बनाउने चाहना राख्छन् । आमाबुबाहरुले जानेर वा नजानेर आफ्नो अधुरा सपना र इच्छाहरुलाई अबोध बच्चाहरुको क्षमता र अभिरुचीको ख्याल नगरिकन जर्बजस्ती लादिदिन्छन् ।
सुपर किड बनाउने मोह
हरेक अभिभावकको एकमात्र इच्छा उनीहरुको बच्चा जसरी भएपनि अगाडि आउन् वा अलराउण्डर होउन् भन्ने हुन्छ । उनीहरुलाई आफ्नो बच्चा अरु भन्दा धेरै प्रतिभावान र सुपर हिरो जस्तै सुपर किड होउन जस्तो लाग्छ । अभिभावकहरुको यस्ता महत्वाकांक्षाको बोझले अबोध बच्चाहरुलाई समस्यामा पारेको छ । पढाइमा राम्रो नतिजाको लागि अंकको खेलमा अब्बल रहनु उनीहरुको विवशता बनेको छ । यसैकारण हरेक वर्ष एसईईको रिजल्ट आएको बेलामा कोही न कोही बच्चाले आत्महत्या गरेको दुखद समाचार पढ्न पर्छ । त्यसैले हरेक आमाबुबाले यस्तो गर्नुहुँदैन सबै बच्चा हरेक फिल्डमा अब्बल आउन सक्दैनन् भन्ने बुझ्न पर्छ ।
आमाबुबाले बच्चाहरुको राम्रो हेरविचार गर्छन् । तर, पढाईमा उनीहरुले राम्रो नतिजा ल्याउन सकदैनन् भने कमी कहाँ छ त रु प्रतिभालाई सिद्ध गर्ने संघर्षको नाममा आमाबुबाले बच्चाहरुलाई दुनियाभरमा आफ्नो नाम उज्यालो बनाउने माध्यम सम्झिएका छन् । सानो ज्यान र कलिलो मस्तिस्कमा यति धेरै बोझ थोपरिदिँदा उनीहरुको हालत कस्तो होला रु यस्तो भागदौडको बीचमा अबोध बच्चाहरुलाई न आफ्नो इच्छा आकांक्षाको पंखेटा फैलाउने फुर्सद हुन्छ न त थाकेर सुस्ताउने फुर्सद नै । बच्चाले जुन क्षेत्रमा रुची राख्छन् उनीहरुलाई त्यसमा अगाडि बढ्न प्रोत्साहित गर्न आवश्यक छ । आफ्नो योग्यता र क्षमता अनुसार स्वंयलाई निखार्ने प्रयत्न गर्न बच्चाहरुलाई आफ्नो परिवारले नै मार्गनिर्देशन गर्न सक्छन् । त्यसैले बच्चाहरुको रुची र चाहनालाई सम्झिंदै उनीहरुलाई यस्तो तरिकाले सहयोग गर्नुहोस् कि आमाबुबाको चाहना र सपना भार होइन उत्प्रेरक बनोस् ।
आफ्नो बच्चाको प्रतिभा चिन्नुहोस्
हरेक बच्चा खास हुन्छन् । हरेक बच्चामा कुनै न कुनै प्रतिभा लुकेको हुन्छ । अभिभावकको नाताले आफ्नो बच्चामा भएको प्रतिभालाई उजागर गराउने जिम्मेवारी हाम्रो हुन्छ । उनीहरुको प्रतिभा पहिचान गरेर हामीले त्यसमा अझै निखार ल्याउनको लागि उनीहरुलाई मद्धत गर्नुपर्छ । सबैमा कुनै न कुनै योग्यता र कमजोरी हुन्छ । हामीले आफ्नो बच्चालाई के मनपर्छ भन्ने कुरा ख्याल गर्नुपर्छ ।
उनीहरुको मनले के चाहन्छ भन्ने कुरा हामीले सम्झिनुपर्छ । बच्चामा केहि कमजोरी हुन सक्छ । हामीले उनीहरुको मद्धत गर्नुपर्छ ताकी उनीहरुले त्यस कमजोरीलाई टाढा गर्नसकुन् । हाम्रो शिक्षा व्यवस्था नै यस्तो छ कि हामी बाल्यकालदेखि नै बच्चालाई कक्षामा प्रथम हुने दबाब दिन थाल्छौं । तर, अब सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । कतै हामीले आफ्नो बच्चालाई सुपर किड्स बनाउने चक्करमा स्वार्थी त बनाएका छैनौं ? जब हामीले बच्चालाई सबैभन्दा अगाडि आउनुपर्ने दबाब दिन्छौं, उनीहरुको दिमागमा उनीहरुले सबैलाई पछार्नु पर्ने कुराले डेरा जमाएर बसेको हुन्छ । उसले सोच्छन् कि प्रथम हुनु नै उनीहरुको जिन्दगीको एकमात्रै उद्धेश्य हो ।
प्रथम हुनैपर्ने अभिभावकको दवाव र उनीहरुको भावनाले कैयौं पटक उनीहरुलाई स्वार्थी बनाइदिन्छ । उनीहरु आफ्नो बारेमा मात्रै सोच्न थाल्छन् । त्यसैले बच्चा जब विद्यालयबाट घर आउँछन् त्यतिखेर तपाईले तिमीले आज कसैलाई सहयोग गर्यौ कि गरेनौरु तिम्रो कारणले कसैको अनुहारमा खुसी देखियो कि देखिएन भनेर सोध्न सक्नुहुन्छ ?
हामीले उनीहरु भित्र अरुलाई मद्धत गर्नुपर्ने भावना पैदा गर्नुपर्छ । यदि हामीले आफ्नो बच्चालाई यस्तो प्रेरणा दियौं भने उनीहरुले जीवनलाई हेर्ने नजर नै बदलिन्छ र यस्ता बच्चा ठूला भएपछि हाम्रो समाज पनि बदलिन्छ ।
बच्चालाई तनाव नदिनुहोस्
बच्चामा पनि ठूला मानिसहरुलाई जस्तै तनाव हुन्छ तर उनीहरुलाई तनावको कारण अरु नै हुन सक्छ । बच्चाको वरिपरि फरक फरक किसिमको माहौल हुन्छ जसले उनीहरुमा के सहि के गलत भनेर छुट्याउन सक्ने क्षमता कम हुन्छ । घर विद्यालय ट्युसन जहाँ पनि उनीहरुले टेन्सनसँग सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । यस समयमा उनीहरुको जीवनमा परिवर्तन पनि धेरै छिटो हुन्छ । यस्तोमा कतिखेर कुन कुराले टेन्सन भएको हो भन्ने थाहापाउन आमाबुबालाई मुस्किल हुन्छ । तर, यसले बच्चाको कार्यक्षमतामा असर पर्छ र उनीहरुको मन सँधै उदास हुन्छ । आजभोली बच्चाहरुलाई पहिलेको तुलनामा धेरै गाह्रो हुँदै गएको छ । उनीहरुले पढ्नुपर्ने विषयसङ्ख्या बढेको छ र हरेक महिना क्लास टेस्ट , युनिट टेस्ट, ट्युसन आदिको दबाब अलग अलग हुन्छ ।
कुनै एक विषयमा राम्रो पकड नबनाएको कारण कुनै बच्चा लगातार त्यसमा कमजोर हुन्छन् । परिक्षाको समयमा पनि उनीहरु टेन्सनमा रहन्छन् । सबै अभिभावकले आफ्नो बच्चालाई फस्र्ट पोजिसनमा देख्न चाहन्छन् । यसै कारण परिक्षाको समयमा धेरै पढाई गर्नुपर्नाले निन्द्रा पुग्दैन र तनाव पनि हुन सक्छ ।